Thursday May 07, 2020 - 17:42:23 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Maamulka dabadhilifka ah ee isku magacaabay Jubbaland ayaa markale soo saaray awaamir ka dhan ah dumarka muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo deegaannada kale ee uu ka maamulo Jubbada hoose.
Taliska waxa loogu yeero Nabad sugidda Jubbaland ayaa soo saaray amar ku socda dumarka xiran xijaabka sharciga ah iyo niqaabka wuxuuna uga digay in ay xirtaan niqaabka isagoo arrinkaas marmarsiimo uga dhiganaya sugidda ammaanka.
"Hay’adda Nabad Sugida iyo Sirdoonka Jubbaland waxay ku war gellinaysaa Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan Guud ahaan Deegaanada Jubbaland in ay ka feejignaadaan adeegsiga ama xirashada Indho shareerka oo kol hore la mamnuucay" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay maamulka Axmed Madoobe.
Wararka ayaa intaas ku daraya in waddooyinka magaalada Kismaayo shalay iyo maanta lagu bahdilayay dumarka xijaabkan oo lamarsiiyay baaritaanno adag, dumarka qaar ayaa laga reebayay xijaabka adag ee sharciga ah waxaana lafarayay in ay xirtaan maryo jilicsan.
Culimaa'udiinka iyo waxgaradka magaalada Kismaayo ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid ladoonayo in qaawanaanta lagu dhiiri geliyo laguna awdo asturnaanta dumarka muslimaadka ah.
Dhaqankan shareeca ladirirnimo ee uu lasoo baxay maamulka Kismaayo ka jira ayaa banaanka soo dhigaya sida uu maamulkan horarka ugu yahay shareecada islaamka,waxaa xusid mudan in inta badan wadamada gaalada reergalbeedka aan lagu dhibin dumarka muslimaadka ah ee jirkooda astura halka dalka Soomaaliya oo dadkiisu muslimiin yihiin 100% maamullada ka jira ay ka liitaan gaalada asalka ah.
ku darso Facebook-ga Liibaan Jeexoow